वर्षायाममा बालबालिकाहरुलाई कसरी जोगाउने ? डा.पौडेल • Health News Nepal
वर्षायाममा बालबालिकाहरुलाई कसरी जोगाउने ? डा.पौडेल
✍️ डा .कृष्ण पौडेल , निर्देशक
यो समयमा आद्रता (ह्युमिडिटी) बढ्ने, पानी पर्ने, पिउने पानीका स्रोतहरु बिग्रिने हुँदा पानीजन्य अथवा खानाजन्य बिरामीहरु बढी हुने गर्छन् । झाडापखाला, आउँ, कमलपित्त अथवा जण्डिसजस्ता हेपटाइटिस बढी हुने गर्छ । धेरै बालबालिकाहरु घरमै छन् । यसकारणले अभिभावकहरुले घरमा रहँदा बालबालिकाको सरसफाइ र खानपिनमा एकदमै होसियार रहनु पर्छ । यस्तै यो मौसम लामखुट्टेको लागि उपयुक्त समय पनि हो । जताततै पानी जम्ने र पानीको मात्रा बढी हुने भएकोले मलेरिया र डेंगुजस्ता रोगहरु पनि बढी हुने हुन्छन् ।
घरवरिपरिको वातावरण विशेषगरी भाडाकुडाहरु खाल्डाखुल्डीहरु पुर्ने र सचेत हुन आवश्यक छ । बालबालिकालाई लामखुट्टेले नटोकोस् र लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्दछ । यदि घरमा कृषिजन्य प्रयोगका लागि ल्याइएका विषादीजन्य पदार्थ छन् भने बालबालिकाले नभेटने ठाउँमा राखिदिनुहोला । घरमा कसैले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म बालबालिकाहरु नपुग्ने ठाउँमा राखिदिनुहोस् । बलबालिकाहरुले कौतुहलताका कारण यस्ता चिज देखेर टेस्ट गर्ने हुँदा धेरै पोइजनिङका केसहरु अस्पतालमा देखिएको छ ।
यसैगरी घरमा दिर्घरोगका बिरामीहरु हुन सक्नुहुन्छ । उच्च रक्तचाप तथा हाइपर टेन्सन, थााइराइडका औषधीहरु खाइरहने अभिभावकहरु हुन सक्नुहुन्छ । यी औषधीहरु बालबालिकाहरुले प्रयोग गर्दा हाई डोज पर्न सक्छ । त्यसैले उहाँहरुले यी औषधीहरु पनि बालबालिकाको पहुँचबाट टाढा राख्नु पर्दछ । १ देखि ३ वर्षका बालबालिकाहरु बढी छुकछुक गर्ने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरुलाई सकेसम्म एक्लै नछोडिदिन हुन अनुरोध गर्दछु ।
स्कुल बन्द भएकाले बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारका सिकाइका विधिहरु रेडियो, टेलिभिजनबाट अथवा अनलाइन क्लासबाट उहाँहरु पक्कै पनि कुनै न कुनै क्लासमा अभ्यस्त नै छन् । घरमा रहेको समय सिर्जनात्मक काममा लागोस् भन्नका लागि सबै सचेत हुनुपर्छ ।
यदि बालबालिकालाई कुनै बिरामीजन्य अवस्था देखियो, नयाँ लक्षणहरु देखियो, झाडापखला, ज्वरो अथवा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्याहरु देखियो भने स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकहरुसँग परामर्श गरिहाल्नुपर्छ । अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल अथवा टेलिफोनमा पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी हामी सबै सचेत बन्यौ भने बालबालिकालाई कोभिड–१८ बाट मात्रै होइन्, बिरामी गराउन सक्ने सबै अवस्थाहरुबाट बचाउन सक्छौं । बालबालिकाहरुलाई बचाउनु नै हामी सबै अभिभावकहरुको कर्तव्य हो।
Tags: Child HealthCorona Virus #Covid19Dr.krishna paudel
थप ५९३ जनामा कोरोनाको पुष्टि , कुल संक्रमितको संख्या ११ हजार ७५५ पुग्यो #Covid19
पिसिआर जाँच गर्ने प्रयोगशाला १० अस्पतालमा थपिदै : (नामावली सहित) #Covid19